यस्तो रह्यो सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाकाे प्रभाव, निर्देशकसमेत खुलेरै समर्थनमा – Health Post Nepal
यस्तो रह्यो सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाकाे प्रभाव, निर्देशकसमेत खुलेरै समर्थनमा
२०७५ फागुन ८ गते १९:०८
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ संगठन संरचना र कर्मचारी समायोजनबारे सरकारले पछिल्लोपटक आफूसित गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलगायत माग राख्दै आइतबारदेखि आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) आबद्ध चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बस्दा बुधबार प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवा प्रभावित भएको छ । देशभरिमा करिब १ हजार ४ सयको संख्यामा कार्यरत सरकारी चिकित्सक एकैपटक बिदामा बस्दा देशभरको स्वास्थ्यसेवा प्रभावित भएको हो ।
देशकै ठूलो र पुरानो वीर अस्पतालमा सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाका कारण स्वास्थ्यसेवा प्रभावित भएको अस्पतालका निमित्तनिर्देशक डा. किरण श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारी सेवाका चिकित्सकहरूले अस्पतालमा सेवा नदिँदा त्यसको प्रभाव सेवाग्राहीमा पर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । अन्य समय अस्पतालमा करिब १ हजार १ सयको हाराहारीमा ओपिडी टिकट बिक्री हुने गरेकोमा बुधबार ९ सय ५० मात्र टिकट बिक्री भएको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । बुधबार अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका चिकित्सहरूबाट अस्पतालले सेवा प्रदान गरेको डा. श्रेष्ठले बताए । सरकारी सेवाअन्तर्गतका अधिकांश चिकित्सक मौखिक जानकारी दिएर बिदामा बसेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
वीरमा सरकारी चिकित्सक मात्र नभई चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीसमेत पहिलेदेखि नै आन्दोलित छन् । उनीहरुले विभिन्न माग राखी ८ दिनदेखि दैनिक १ घण्टा अस्पतालमा धर्ना दिइरहेका छन् ।
निर्देशक डा. गौतम स्वयम् पनि आन्दोलनकारी गोदानको पक्षमा देखिएका छन् । गोदानको आन्दोलन र मागप्रति खुलेरै समर्थन जनाउँदै उनले भने, ‘सरकारी चिकित्सकहरूका माग जायज छन्, त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ ।’
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा पनि सरकारी चिकित्सकहरूको सामूहिक बिदाका कारण बुधबार सेवा प्रभावित भएको निर्देशक जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । प्रसूतीगृहमा सरकारी चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बसेपछि विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकहरूले मात्र ओपिडी सेवा चलाएका थिए । विकास समितिका चिकित्सकहरूको ड्युटीका कारण सेवा अवरुद्ध नै भने नभएको गौतमले बताए । उनका अनुसार सामूहिक बिदाका क्रममा कतिपय चिकित्सकले लिखित रूपमै बिदाको माग गरेको र कतिपयले मौखिक जानकारी गराएका थिए ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा पनि सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाले सेवाप्रवाहमा असर पुगेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार सरकारी चिकित्सकहरूको सामूहिक बिदाको प्रभावका कारण अस्पतालमा बुधबार अस्पताल आउने बिरामीको संख्यामै कमी आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सकहरू बुधबार मौखिक रूपमा जानकारी गराएर बिदामा बसेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबार अस्पताल विकास समितिअन्तर्गतका चिकित्सकहरूले सेवा दिएका थिए । यद्यपि, एकैपटक ठूलो संख्यामा सरकारी चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बसेका कारण सेवाप्रवाहमा केही मात्रामा भने असर पुगेको उनी बताउँछन् ।
‘ती चिकित्सकले प्रत्यक्ष रूपमा उपचारमा संलग्न नरहे पनि कतिपयले बिरामीलाई उपचार परिपाटीबारे जानकारी दिएको मैले थाहा पाएको छु,’ डा. राईले भने, ‘यस हिसाबले हेर्दा आन्दोलनमै रहे पनि उपचारमा सहयोग गरेर सरकारी चिकित्सकले पेसाको संवेदनशीलताप्रति जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गरेका छन् ।’
महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा पनि बुधबार गोदानको आन्दोलनको प्रभाव रह्यो । अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईका अनुसार केही सरकारी सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरू अस्पताल आएको देखिए पनि उनीहरूले हाजिर भने गरेका थिएनन् । ‘ती चिकित्सकले प्रत्यक्ष रूपमा उपचारमा संलग्न नरहे पनि कतिपयले बिरामीलाई उपचार परिपाटीबारे जानकारी दिएको मैले थाहा पाएको छु,’ डा. राईले भने, ‘यस हिसाबले हेर्दा आन्दोलनमै रहे पनि उपचारमा सहयोग गरेर सरकारी चिकित्सकले पेसाको संवेदनशीलताप्रति जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गरेका छन् ।’
सरकारी सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बसेपछि अस्पतालले रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा विकास समितिअन्तर्गतका चिकित्सकबाट बिरामीलाई सेवा प्रदान गरेको उनले बताए । अस्पतालमा दैनिक ओपिडीमा ४ सय बिरामी आउने गरेको र उक्त संख्या बुधबार पनि कायमै रहेको डा. राई बताउँछन् । यस हिसाबले हेर्दा चिकित्सकको सामूहिक बिदाका बाबजुद पनि बुधबार कान्तिमा बिरामीको चाप उस्तै रह्यो ।
सरकारी सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरूले मौखिक रूपमा गोदानको कार्यक्रमअनुरूप सामूहिक बिदामा बस्ने जानकारी गराएको डा. राई बताउँछन् । उनका अनुसार सामूहिक बिदाको कार्यक्रमले बुधबार विशेषज्ञस्तरको गुणस्तरीय सेवा भने प्रभावित भएको छ ।
गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले देशभरका सरकारी चिकित्सक बुधबार सामूहिक बिदामा बसेको बताए । अधिकांश अस्पतालका निर्देशकहरूको समेत गोदानको आन्दोलनमा साथ र समर्थन रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘शतप्रतिशत भन्ने नहुन सक्छ, तर बुधबारको हाम्रो सामूहिक बिदाको कार्यक्रम देशैभर सफल भएको छ ।’
सोमबारदेखि सुरु भएको सरकारी चिकित्सकको सामूहिक राजीनामा संकलन अभियानको पछिल्लो अवस्थाबारे डा. पाण्डेले भने, ‘राजीनामा संकलन अभियान जारी छ, सम्भवतः भोलिसम्म सकिने अनुमान छ ।’ राजीनामा संकलनपश्चात् त्यसको हस्तान्तरणका लागि देशभरका सरकारी चिकित्सक बिहीबार काठमाडौं आउने कार्यक्रम संघले आइतबार नै तय गरिसकेको छ । गोदानले शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गरी असहयोग आन्दोलन सुरु गर्दै छ ।